Android uu la wareegay oo dunida sidii nidaamka qalliinka waaweyn ee telefoonada smart iyo kiniiniyada isticmaali maanta. Iyada oo sida arrimuhu ah, dad badan waxa ay ogaadeen waxa ay aad u faa'iido badan u ciyaaro music iyo videos ka raaxada ee Timir ay halkii la isticmaalayo laptops iyo kombiyuutarada desktop for isku mid. Sababtan awgeed, ciyaartoyda video si joogto noqdo barnaamijyadooda oo waaaweyn u leedahay in telefoonada smart iyo kiniiniyada. Halkan waxaan ku eegno 5 ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican music android suuqa maanta.
Waa app lacag la'aan ah, laakiin ay version pro waa $ 6.
Waxaad halkan kala soo bixi kartaa: http://m.en.softonic.com/app/mx-video-player/android/download
Waxaa ka ciyaari kara videos leh xitaa marka ay screen aan la soo bandhigay. Sidoo kale ay interface ciyaar saaxiibtinimo oo ay muuqaalka waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican gaar ahaan telefoonada android.
App Tani ma laha doorasho delete ciyaaryahanka si aad u leeyihiin in ay tagaan faylasha aad si aad u tirtiri kartaa file ah.
NO. 2: VLC Player u Android
Waa lacag la'aan ah si ay u soo bixi.
Waxaad halkan kala soo bixi kartaa: http://www.videolan.org/vlc/download
VLC Muran la'aan ciyaaryahanka warbaahinta ugu caansan ka mid ah dadka isticmaala PC daaqadaha adduunka baqdin ay miday iyo tayada xaqiijiyey. VLC loo yaqaan for tayada tayada sawirka lammaaneeyey ay awooddiisa ah inuu ciyaaro diyaariyeen ah layaab balaadhan oo ah qaabab video. Waxaa sidaas ma aha lama filaan ah in VLC waa sidoo kale waxaa ka mid ah ugu wanaagsan ee isticmaala android maanta. Sida walaashiis PC ay, version android waa mid xoogan. Waxaa badan oo version file aan ku xuso karaa in aad si toos ah ay taageero u hab maamuuska geeyo shabakad qulquli karaan mahad. Iyadoo VLC, user ah sidoo kale waa ay awoodaan in ay caleenta files si toos ah halka bixiya Cajalado track badan.
Haddii aad tahay taageere ka mid ah qaababka sida muuqaalada auto wareeg oo gacanta ku sida gacanta dhalaalka, gacanta ku dhinac-ratio, oo ay gacanta ku tilmaam, ka dibna waxaa saaran si aad u aaga fiican la app. App ayaa sidoo kale waa mid aad u wanaagsan oo leh gacanta headset. Haddii aad raadinayso app ka shirkad sumcad markaas waan hubaa ha ka gaabsan doonaa iyadoo la isticmaalayo mid ka mid siiyey ay halbowlaha ee ciyaarta ahay.
Inkastoo qaababka ay tiro badan, app lama jaanqaadi karaan dhammaan taleefanada android hayo maanka ay baahida marka la eego shuruudaha hardware. Latest daydo android u badan tahay in ay la jaan qaada. Iyadoo app ka badan android telefoonka aad soo iibsatay sano ka hor. Waxa kale oo aad ka heli doontaa waxa ay adag tahay in la ciyaaro qaar ka mid ah qaabab video sida .TS inkasta oo kuwa ugu waaweyn ay yihiin bixiyaan.
Waxaa Download for free
Waxaad halkan kala soo bixi kartaa: http://www.bsplayer.com
Tani waa mid ka video iyo warbaahinta aad loo jecel yahay ciyaaryahanka uu sii adkaynayo ay meel ka mid ah Dalka Chine android ugu jeclaa. Waxa uu cadeeyay in ay guul taageerada kala duwan oo ay ka mid yihiin qaabab Advanced Video codec Qeexid Sare (AVCHD). Format waxaa inta badan ka shaqeeya ee adduunka ee kaamirada shineemada-in. Ha Beenabuurte in ay ciyaaryahanka waa wax ku ool ah ee qaabab kale oo adag sida tusaale oo wanaagsan yihiin: mkv, OGM, QuickTime, MOV kuwo kale oo badan.
Iyadoo qaab video kasta oo app waxa ku taageeri doonaa. Haddii aad u jecel subtitles markaas app waa weyn ee u ogolaanaya dadka isticmaala ku milmaan content video la subtitles ka files of qaabab kala duwan ah. Quruxda waxaa ka mid ah ay tahay in aad heli doonto faa'iidooyin ay ka mid lacag la'aan ah.
Dhinaca kale oo kaliya la app waa in ay qabtaan waxa laga yaabaa hoos ku qoran waqti qaar ka mid ah qaabab tusaale mkv
Waa bilaash ah si ay u soo bixi app
Waxaad halkan kala soo bixi kartaa: http://www.vplayer.net
Tani waa app kale oo awood badan ku boqortooyadii reer android ciyaartoyda video baqdin ay scalability eego qaabab qaban karaa. Aan niraahno qaban karaa shiidaa oo dhan codecs video iyo codecs audio aad u baahan tahay oo lagu daray waxa ay bixisaa taageero u multi-track audio. Waxa kale oo loo baahan yahay in la ogaado in ay taageerto fara badan geeyo hab maamuuska network tusaale HTTP, RTP, MMS iwm Guud app waxa uu leeyahay awoodaha kelmadaha xoog badan.
ay interface waa user saaxiibtinimo. Marka aan la isticmaalayn waa hoos u xidhaa.
Vplayer waa app ah android in sameeya door bidayaan in qalabka la hardware wanaagsan sidaas video tayada kuwii laga yaabaa in aanay ilaa xoq heerka hoose qalab android. Aaladaha qaarkood waxay u baahan doonaan hagaajinta OS ah u waafaqsan yahay app.
App Tani waxaa laga heli karaa $4.99
Waxaad halkan kala soo bixi kartaa: http://www.archos.com
Tani waa ciyaaryahan kale oo video in si fiican loogu talagalay oo ku faantaa ee ay interface user wanaagsan. Tani waa ciyaaryahan cajiib ah u gaar ah. Waxay leedahay slider in-video mugga iyo bar ah menu saaxiibtinimo. Oo weliba waxaad eegi kartaa iyada oo ay interface la navigation badhamada la heli karo. Waa app ah oo kuu ogolaanaya in aad si aad u koontaroosho dhalaalka suuqa kala sidoo subtitles hubinta ee track ah. Waxa kale oo aad isku shaandheyn karaa shaashadda of video ciyaaryahan Archos sida aad muusiko ah. Haddii aad raadinayso ciyaaryahan si aad u soo dejisan kartaa subtitles badan oo uu u dooranayo video ciyaaryahan Archos. Waxaad heli kartaa oo dhan fayl video ama maktabadda oo si toos ah u cusbooneysiin filimada, dhacdooyin ka IMDB. Si aad ku dari ku yaal waa ciyaaryahan taageera ugu qaabab video oo aad ka heli karto ka shabakadaha fog.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad dhigay Bookmarks oo iyana waxay ahaan doonaan saved.to darina kuu ogolaanaysaa inaad aragto faahfaahinta farsamada ee file ah oo ay ka mid yihiin qaabka, cabbirka iyo kuwa kale.
Waa qaali ah marka loo eego ciyaartoyda kale video. Waxa aanu ciyaari DSLR qaabab video.
Waa hagaag, aqoonta, kuwaas oo dhan muuqaalada iyo fursadaha ku hay, aad haatan dooran kartaa ciyaaryahan video ku haboon baahidaada.
> Resource > Android > The Best 5 Players Android Video